धुर्मुस–सुन्तली ब्रान्ड एम्बेस्डर बनाउँदै उदायो ‘सन’ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स
३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने, देशका कुनाकुनामा पुग्ने घोषणा
| 2017-09-24 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा नेपालको वित्तीय क्षेत्र लगभग अराजकप्रायः रहेको विज्ञहरुको समेत आलोचना छ ।
त्यस्तो हुनुका पछाडिका धेरै कारण मध्ये एक हो, वित्तीय बजारमा बैंकिङ क्षेत्रको मात्रै एकाधिकार (मोनोपोली) हुनु । वित्तीय क्षेत्रमा बैंकहरु कतिसम्म हाबी छन्, भन्ने तथ्यांकले नै देखाउँछ ।
५० प्रतिशत बढी वित्तीय बजारका स्टेकहोल्डर बैंकहरुले लगभग समग्र ‘इकोनोमिक मोबिलिटी’ ‘कन्ट्रोल’ गरेका छन् । मोनोपोलीजम कुनै पनि क्षेत्रको अराजकताको मुख्य कारण हो ।
तर रोक्ने कसले ?
वित्तीय क्षेत्रमा बिमाको उपस्थिति त्यसका लागि पनि उपयुक्त हुन सक्ने बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले संकेत गरे ।
के बिमा कम्पनीहरुका लागि यो अवसर हो त ?
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको उद्घाटनका क्रममा इन्स्योरेन्सको आफ्नै भवन कमलादीमा अध्यक्ष चापागाईले अर्काे कुरा पनि उठाए, ‘सरकारले बिमा कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी बन्ड जारी गर्न आवश्यक छ । किनकि बिमा कम्पनीहरूको बिमाकोष बढ्दै गएको छ । त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले विकल्प सोच्ने बेला आइसकेको छ ।’
अध्यक्ष चापागाईंको भनाइले बिमा कम्पनीहरुमा जम्मा भएको रकम लगानी भइरहको छैन भन्ने स्पष्ट छ । रकम जम्मा हुने र त्यसको लगानी नहुने हो भने रकमको वास्तविक सुरक्षा हुँदैन ।
पूँजीले पुँजी नै उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपालको वित्तीय बजारबारे राष्ट्र बैंक अर्थात् सरकारले पक्कै पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ ।
बिमा कम्पनीहरुलाई यो चुनौती पनि त हो !
उनले थपे, ‘जीवन बिमा कम्पनीहरूको बिमा कोषमा ठूलो रकम थुप्रिएको छ । नयाँ आउने जीवन बिमा कम्पनीहरूले यसको आकारलाई झन् बढाउने छन् । त्यसैले यसलाई उचित स्थानमा लगानी गर्न सरकारले विषेश ध्यान दिनु पर्छ ।’
अध्यक्ष चापागाईको भनाइमा जीवन बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो लगानीको अधिकांश हिस्सा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा लगानी गरिरहेका छन्, यदि कुनै कारणले वित्तीय क्षेत्रको अवस्था खस्कियो भने बिमा कम्पनीहरुको अवस्थामा पनि गिराओट आउन सक्छ ।
यसले के देखाउँछ भने, नेपालको वित्तीय बजारमा बिमा कम्पनीहरु अझै पनि बैंकिङ क्षेत्रको हेजेमोनीबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सहरुले आफ्नो आगामी बाटोबारे सोच्दै गर्दा यस्ता चुनौतीलाई ध्यानमा त राख्नै पर्ला, सँगसँगै बिमा र बैैंकको बजार नैतिकता तथा सीमा/हद समेत पहिल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
किनकि अध्यक्ष चापागाईले नै ‘बिमा कम्पनीहरूले लगानीका अन्य क्षेत्र खोजी गर्नु पर्ने’ समेत सुझाएका छन् ।
निजी क्षेत्रले पनि पछिल्ला दिनमा बैंकलाई निकै आलोचना गर्ने गरेका छन् ।
निर्माण व्यवसायीहरुले मुख्य दुई किसिमका गुनासो बैकसँग राख्ने गरेका छन्– ‘बैंकहरु घरजग्गालाई मात्रै धितो राख्न प्रश्रय दिन्छ, जबकि यो अनुत्पादक क्षेत्र नै हो, जसले नेपालको क्यापिटल मार्केटले पुँजीको पुनरुत्पादन गरेको देखिदैन र अर्काे ‘बिजनेस प्रोफाइलका आधारमा पनि लोन दिन सक्नु पर्छ । जबकि बैंकहरु व्यवसाय मैत्री बन्नु पर्नेमा मुनाफामुखी मात्रै बनिरहेका छन् ।’
यस्ता गुनासा वित्तीय बजारमा प्रवेश गर्दै गरेको सन नेपालका लागि भिटामिन हुन सक्छन् पनि ।
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आफ्नो कार्य शुभारम्भ गरेको सो कार्यक्रममा शुभकामना समेत दिदै अध्यक्ष चापागाईंले अर्काे कुरा पनि भने ।
नयाँ कम्पनीहरूले नयाँ व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने कुरा ।
बिमा तथा बैंकिङ क्षेत्रमा जनशक्तिको हानथाप छ । मानव संसाधनको अवाञ्छित टर्नओभर व्यवसायिक सफलताको बाधक पनि हो ।
सीमित जनशक्ति नै एउटा कर्पाेरेट सेक्टरले छिनाएर अर्काेमा, र अर्काेलाई छाडेपछि एउटामा जानु पर्ने ह्युमेन रिसोर्सको दुखलाग्दो अवस्थाबाट पनि टाढा रहन सुझाव दिएका छन् ।
उनले भन, ‘बजारमा यति धेरै सक्षम तर बेरोजगार युवाहरू छन् । दैनिक सयौंका संख्यामा युवाहरू बिदेसिन्छन् । तिनै सक्षम व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नेबारे सोच्नु पर्छ ।
देशका कुना कुना पुग्ने छ सन लाइफ– अध्यक्ष अनुज क्याल
राजधानीमा एकै दिन दुईओटा नयाँ जीवन बीमा कम्पनीले आफ्नो कारोबार सुरु गरेका छन् । क्याल ग्रुपको नेतृत्वमा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो कारोबार सुरु गरेकै दिन युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि शुक्रवारदेखि औपचारिक रूपमा व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको हो ।
काठमाडौं कमलादीमा केन्द्रीय कार्यालयमा आफ्नो सेवाको उद्घाटन गरेको यो बिमा कम्पनीले नेपाली वित्तीय बजारमा नयाँ ढंगले काम गर्ने र देशको कुनाकुनासम्म पुग्ने सोच लिएको अध्यक्ष अनुज क्यालको भनाइ छ ।
३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई
सत्यनारायण क्याल, नेपाली उद्यमी बजारमा चिरपरिचित नाम । उनकै अगुवाइमा विभिन्न युवा र उम्दा युवा लगानीकर्ताहरु यस बिमा कम्पनीमा आबद्ध छन् ।
बिजनेस घरानीयाहरु मिलेर सुरु गरेको सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पाइपलाइनमा रहेका १२ मध्ये प्रक्रिया पराएर अनुमति लिनेमध्ये ३ ओटा भित्र परेको छ ।
२ अर्ब चुक्ता जारी पुँजी राखेर संचालनमा आएको यस कम्पनीको अध्यक्ष अनुज कायल हुन् ।
यसका महाप्रबन्धक कमलराज गौतम रहेका छन् । कम्पनीमा ७० प्रतिशत सेयर प्रोमोटरका हातमा रहने तथा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने योजना समेत रहेको छ ।
सत्य नारायण क्याल सहितको संयुक्त लागनी गर्नेहरुमा रोशन केसी, प्रदीप रुन्ड्टा, प्रमोद अग्रवाल, पवन कुमार बंशल, सुशिल कुमार धुरका, पुस्कर भक्त शर्मा, निता शर्मा लगायत रहेका छन् ।
ब्रान्ड एम्बेस्डर बने पुनःनिर्माण दम्पत्ती धुर्मुस सुन्तली
धेरैले चाहेपनि पाउन मुस्किल कलाकार जोडी हुन् हास्य कलाकारद्वय सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) ।
पछिल्ला दिनमा पुनःनिर्माणका ब्रान्ड समेत बनिसकेको यो जोडीलाई सन लाइफ इन्स्योरेन्सले आफ्नो कम्पनीको ब्रान्ड एम्बेस्डर बनाएर अघि बढेको छ ।
युनियन लाइफ पनि
त्यस्तै, युनियन लाइफले बानेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालयबाट आफ्नो सेवा उद्घाटन गरेको हो । यसको उद्घाटन पनि बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईंले नै गर्न भ्याए ।
चापागाईले सन नेपालको उद्घाटन गर्ने क्रमममा आगामी २ वर्षभित्र नेपालमा बीमाको दायरा दोब्बर पुर्‍याइने दाबी गरेका छन् ।
यतिबेला नेपाली वित्तीय बजारमा बिमा क्षेत्रको पहँुच अर्थात् कभरेज मात्र ७ प्रतिशत रहेको उनले बताए ।
कारोबार सञ्चालनको अनुमति पाएको २ दिनमै युनियनले पनि विधिवत कारोबार सञ्चालन गरेको हो ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २०७४ वैशाख २४ गते दर्ता भएको युनियनले बीमा समितिबाट असार २० मा इजाजत प्रमाणपत्र पाएको र असोज ४ मा कारोबार सञ्चालनको अनुमति पाएको आयोजकको दाबी छ ।
कम्पनी सचिव ईश्वरकुमार सेढाईंले बताए अनुसार युनियनले प्रारम्भिक चरणमा २५ शाखामार्फत सेवा प्रदान गर्नेछ भने क्रमिक रूपमा शाखा विस्तार गर्ने योजना छ ।
हाल यस बिमा कम्पनीले सीमित भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा योजना, सावधिक लघु जीवन बीमा योजना र वैदेशिक रोजगार जीवन बीमा योजना सञ्चालन गर्ने छ ।
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्षमा सुलभ अग्रवाल, सञ्चालकमा शेखर गोल्छा र सन्दीपकुमार अग्रवाल छन् । त्यस्तै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा मनोजकुमार लाल कर्ण छन् ।
युनियनको मुख्य लगानीकर्ताका रूपमा जगदम्बा ग्रूप, गोल्छा ग्रूप, न्यौपाने ग्रूप, गाडिया ग्रूप, टिवडेवाल ग्रूप र राजेश हार्डवेयर रहेका छन् ।
आइतबार, ८ असोज, ०७४
भारतीय बिरा बियरको तीन भेराइटी नेपाल�...
वाइवाइको प्रतिस्पर्धीको रुपमा ‘क्वा�...
थपिए भन्सार र राजस्व कार्यालयः प्रशा�...
आवश्यक पहिचानका आधारमा बजेट...
व्यावसायिक खेतीमा बढ्दो आकर्षणः कराे...
सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य...
शिवपुरी गाउँपालिकाले ल्यायाे बजेटः श...
जुम्लामा बजेट प्रस्तुतः सडक, सञ्चार र ...
कुन–कुन जलविद्युत्मा भित्रियो चिनिय�...
हाइड्रोमा भित्रियो चिनियाँ लगानी, कत�...
कर्णाली नदीमा माछा संकटः संरक्षण गर्�...
प्रधानमन्त्रीले गरे ‘हाउजिङ एक्स्पो�...
परिसंघले गर्यो पिएचडी चेम्बरसँग छलफल...
गृहको नजरमा आइएनजीओको सवा ७४ अर्ब...
जिएसटी प्रणाली लागु गर्ने सरकारको तय�...
योजना आयोगको निष्कर्षः ३ वर्ष यता दोह�...
विश्व बैंकको प्रक्षेपणः नेपालको वृद्...
यस्तो छ अनुदानको ऋण लिने प्रक्रिया ...
‘बुढीगण्डकी अब बन्दैन टेबुल टेनिसको �...